Ungayisetha Kanjani Iphini YeSms Ku-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayisetha kanjani i-pin ye-sms ku-twitter?
May 12, 2021 0 Comentarios 545
Umsebenzisi we-Twitter unenketho ye- setha i-PIN ye-SMS; Ngale njongo, udinga ukulandela le nqubo: Okokuqala, kufanele uqiniseke ukuthi idivayisi yakho ephathekayo ixhunywe ku-akhawunti yakho ye-Twitter.
Okulandelayo, uMsebenzisi ungena ngemvume ku-Akhawunti yakhe ye-Twitter kuwebhu futhi atholakala ku- Ukumiswa kweselula; Faka i-PIN oyifunayo, okumele ibe nezinhlamvu ezine zamagama, bese uya ezansi kwekhasi, bese uqhafaza ku-Gcina izinguquko.
Uma ngabe I-PIN Yomsebenzisi, kuzovela umyalezo wokuqinisekisa. Uma umsebenzisi esebenze i-PIN ye-Akhawunti yakhe, kufanele ayifake ngaphambi kombhalo we-Tweet noma umyalo we-SMS awuthumela kwikhodi yakhe emfushane ye-Twitter.
Shintsha noma Susa i-PIN ku-Twitter
I-PIN iyinombolo yokukhomba yomuntu umsebenzisi angayisebenzisela yona ukuqinisekisa ukuphepha kusuka ku-akhawunti yakho ye-Twitter. Nge-PIN ungangeza isiqalo kuzibuyekezo zakho nemiyalo yeselula.
Umsebenzisi, kanye wenze i-PIN yakho isebenze Kwi-akhawunti yakho ye-Twitter, unezinketho zokuguqula noma zokususa i-PIN. Ngalo mqondo, kudinga ukuya Ekucushweni kwamadivayisi eselula; kanye lapho, inkambu ye-PIN itholakala.
Enkambeni yePIN, Umsebenzisi uthola Shintsha noma Susa i-PIN yakho ngasikhathi sinye. Ngale njongo, udinga ukupheqa uye ezansi kwekhasi bese uqhubeka nokukhetha Gcina izinguquko, chofoza.
DALA AMAVIDIYO OKUPHILA KU-TWITTER
Ku-platform ye-Twitter, uMsebenzisi unethuba loku dala amavidiyo abukhoma futhi wabelane ngokwenzekayo ngesikhathi sangempela. I-Twitter yindawo enhle yokuthola ulwazi kunoma yisiphi isihloko somhlaba jikelele.
Ukuze Umsebenzisi we-Twitter enze i-Live Video, udinga ukwenza okulandelayo: Chofoza ku-Tweet Box; chofoza okuthi Phila kusikhethi esiphansi; sakaza bukhoma, unenketho yokuvala ikhamera bese ubamba iqhaza ngomsindo kuphela, lapha chofoza kumakrofoni.
Okulandelayo, uMsebenzisi uchofoza ku-Transmit Live; can qeda ividiyo yakho ebukhoma Nganoma yisiphi isikhathi, chofoza ku-Stop phezulu ngakwesokunxele bese uqinisekisa ukukhetha kwakho kumenyu ekhonjiswayo.
Vumela ababukeli ukuthi bacele ukujoyina ukusakaza kwami ​​kwe-Twitter
Umsebenzisi we-Twitter unenketho yokuvumela ababukeli ukuthi bacele Joyina ukusakaza kwakhoUdinga ukuhambisana nale nqubo kuphela: Chofoza ibhokisi ukuze uthumele ku-Tweet; Chofoza okuthi Bukhoma ezansi kwebhokisi.
Chofoza isithonjana ekhoneni eliphezulu kwesokudla ukwenza kube lula kubasebenzisi Ababukeli bukhoma, Isicelo Sokujoyina Ukudluliswa Komsebenzisi; chofoza ku-Sakaza bukhoma ukuqala ukusakaza kwakho kwinethiwekhi yezokuxhumana i-Twitter.
Lapho umsebenzisi we-Twitter Cela ukujoyina ku-Transmission of the User, isaziso sizovela engxoxweni; chofoza isithonjana ukuyengeza. Uma uthatha isinqumo sokususa isivakashi, chofoza u-X phezulu ngakwesokudla kwe-avatar yazo.
1 Shintsha noma Susa i-PIN ku-Twitter
2 DALA AMAVIDIYO OKUPHILA KU-TWITTER
3 Vumela ababukeli ukuthi bacele ukujoyina ukusakaza kwami ​​kwe-Twitter
Ungayivikela kanjani i-akhawunti yami ku-twitter?
Ungakubika kanjani okuqukethwe okuyimfihlo kwe-multimedia?